Warshadaha Qalabka Iftiiminta, Shirkadaha - Shiinaha Soosaarayaasha Qalabka Nalalka
Li-ion 11.1V 3500mah 3S Xirmooyinka batteriga Lithium Polymer ee loogu talagalay Ilayska Lumbaraha iyo Battery Li-ion Battery 3S Li-in batari
Waxaan bixinaa Li-ion 11.1V 3500mah 3S Lithium Polymer Battery Pack loogu talagalay Laydhka Nalalka Iftiinka iyo Li-ion Battery 3S Li-in battery batteriga waxaa loo isticmaali karaa LED, nalalka wadada cadceedda iyo nidaamka kaydinta tamarta qoraxda iwm. u samee baakadka sida dalabkaaga ah, fadlan si xor ah noogu soo wargeli dalabkaaga iyo dalabkaaga oo faahfaahsan.
26650 5000mah 26650-5A Li-ion 3.7v Batteriga dib loo soo celin karo ee Toosh
Waxaan bixinaa 26650 5000mah 26650-5A Li-ion 3.7v Batteriga dib loo soo celin karo ee Tooshka, iftiinka qoraxda, nalka wadooyinka.Located ee magaalo farsamo sare oo Shiinees ah, Shenzhen, PLM waa hormuud R&D, soosaarida Lifepo4 iyo baytariyada kale ee Li-ion . Tan iyo markii la aasaasay 2008, PLM waxay had iyo jeer ku adkeysaneysaa inay siiso wadarta xalka awooda macaamiisha dhinacyada gawaarida korontada / qalabka korontada / keydinta awooda / tamarta keydinta tamarta / qalabka casriga oo leh khibrad adag iyo qalab otomaatig ah oo sareeya .Waxaan aqbalnaa amarka OEM / ODM dhammaan wadamada ka socda Fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto
biyuhu 7.4v 18650 2S3P 3600mah lithium ion baakid batrool loogu talagalay iftiinka baaskiilka, iftiinka qoraxda, iftiinka wadada
Waxaan bixinaa biyo-xajiye 7.4v 18650 2S3P 3600mah lithium ion oo xirmooyin batari ah oo loogu talagalay nalka baaskiilka, iftiinka qoraxda, nalka dariiqa.Inta badan 18650 baytariyada ama batteriga xoogga badan, waxaan ballanqaadayaa inaadan isticmaalin baytariyada tayadoodu hooseyso Hal unug oo ah 3400mAh, 3500mAh ama 2600mAh, ku soo aruuri wareega wareega, ka ilaali batteriga qulqulka xad-dhaafka ah, ka sarreeya iyo ka hooseeya korantada, wareegga gaaban iyo xakameynta heerkulka. Waxaa badanaa loo isticmaalaa toosh, iftiinka deg degga ah, kaameeraha, miyuyuutareedka wireless, iyo codsiyo kale oo kasta oo u baahan batari io awood koronto… Waxaanna loo dhoofinay Mareykanka, Yurub, Koonfur Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, IWM. soo saaraha loogu talagalay batari lithium dib loo soo celin karo oo leh khibrado sannado badan leh.Waxaan aqbalnaa amarka OEM / ODM ee ka imanaya dhammaan waddamada shisheeyaha ah. Fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto wth